Mark Zuckerberg rinoshandisa Bitcoin kubatsira decentralize Facebook
The Michina powering bitcoin aigona kubatsira kuvandudza Facebook mune ramangwana, Mark Zuckerberg akati.
Sechikamu kuzvipira kubatsira kugadzirisa nzvimbo pamusoro 2018, ayo muvambi akati kuti aongorore kushandiswa itsva yepamusoro kurimisa kuva zvikuru kudaro centralized.
Mumwe ruzivo iwayo bitcoin, akati.
“A yakawanda isu apinda zvemichina nokuti tinotenda kunogona decentralizing simba kuti anoisa zvakawanda simba mumaoko dzevanhu. (Mana Mashoko Facebook kwakaita basa yokutanga vagara “kupa vanhu simba”.) Kare kuma1990 uye 2000s, vanhu vazhinji vakatenda Michina yaizova decentralizing simba,” Iye akanyora refu mumhanyi.
“asi nhasi…zvino vanhu vazhinji vanotenda zvemichina chete centralizes simba pane decentralizes izvozvo.”
“Pane zvinokosha pakaunda-dzinokura iyi - kufanana encryption uye cryptocurrency - kuti kutora simba kubva centralized gadziriro vakamugadzikazve mumaoko evanhu. Asi kuuya ngozi yokuva nesimba kudzora. Ndiri kuziva kuenda zvakadzama uye kudzidza zvakanaka uye kunaka zvatinoita ruzivo izvi, uye sei yakanakisisa kushandisa navo mabasa edu,” akanyora.
Bank of England haina urongwa vomurova cryptocurrency
The Bank of England aregedza urongwa vomurova ayo digitaalinen mari pachake uchitarisana nezvemhosva kukanganisa wayo mari hurongwa.
Reserve Bank The U.K. yakaudza FTAdviser kuti ine “hapana ano zvirongwa” kuti vomurova yayo cryptocurrency, asi acharamba tsvakurudza nyaya.
The BoE akaratidza izvozvo akadonha urongwa pamusoro nezvokunetseka kuti veruzhinji kuti kurega kushandisa wezvokutengeserana Maakaundi Okubhengi uye anozodzidza BoE raMwari digitaalinen kubhadhara marongedzero kwema uye kutenga zvinhu. A uremu chipe BoE cryptocurrency kungatungamirira yezvokutengeserana mabhanga inoyerera mari nokukweretesa, kukonzera “mhirizhonga” ari upfumi, vakati.
Leveraged Bitcoin ETF zvinganaka kuti SEC
U.S. Fund mamaneja vari kuronga kuvaka "leveraged" uye "Ivan Kuchin" mari kuti aizomuka – kana kuwa – kaviri sezvo kutsanya sezvo mutengo bitcoin musi wakapiwa.
Direxion Chakanaka Management LLC anoronga kunyora zvinhu zvakadai pamusoro Intercontinental Exchange Inc raMwari NYSE Arca Exchange kana U.S. kuchengetedzeka regulators kupa mvumo, maererano pakunamata kubudikidza Exchange vhiki rino.
Saka zvakawanda U.S. Kuchengetedzeka uye Exchange Commission yadzikira kana wambomiswa vose vaitaura.
Overstock anogamuchira US $ 100M kubva George Soros mari blockchain muzvirongwa uye zvakawanda
Overstock.com chete une chikuru zvikuru chiri bimvu yokuchinja kubva rimwe guru mazita ari mari, uye CEO Patrick Byrne inoti zvikuru zvichaita mari blockchain basa chekambani.
The kambani kutaurwa imwe kuchengetedzeka uye Exchange Commission (SEC) pakunamata vhiki rino kuti anaro mumwe warandi yakanga kodzero dzayo kutenga $100 miriyoni kukosha migove. Kunyange zvazvo pakunamata haana kuona investor ichi, Byrne akaudza CoinDesk raiva Quantum Fund, neKomisheni billionaire George Soros.
Homeowners mhiri America vari kuedza kutengesa mamiriyoni dhora misha yavo nokuda Bitcoin
Mumakore gore, ...
3 Bitcoin kuchera omusipiresi ...
Previous Post:Chinonyanya kukosha zviitiko 2017 muna Crypto Community
Next Post:ari ICO Market achachinja sei mu 2018?